Nanokatra indray ny sisintany i Aostralia taorian'ny 18 volana nisian'ny valan'aretina COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Nanokatra indray ny sisintany i Aostralia taorian'ny 18 volana nisian'ny valan'aretina COVID-19
Airlines • Airport • Vaovao Mafampana Aostralianina • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nanokatra indray ny sisintany i Aostralia taorian'ny 18 volana nisian'ny valan'aretina COVID-19.
Na dia voahidy aza ny sisintany iraisam-pirenena ho an'ny Aostraliana any amin'ny fanjakana Victoria sy New South Wales (NSW) ary ny Faritanin'ny Renivohitr'i Aostralia, dia mbola mihidy ho an'ny mpizahatany vahiny ihany ny firenena, afa-tsy ireo avy any Nouvelle-Zélande mifanila aminy.
Ny governemanta Aostraliana dia namoaka ny iray amin'ireo valinteny henjana indrindra tamin'ny areti-mifindra, nanakatona ny sisintany iraisam-pirenena 18 volana lasa izay.
Ny sidina iraisam-pirenena avy any Singapore sy Los Angeles, Etazonia no tonga voalohany tao Sydney.
Mpandeha 1,500 eo ho eo no andrasana hizotra ho any Sydney sy Melbourne mandritra ny andro voalohany nampihena ny fameperana.
Ny olom-pirenena Aostraliana vita vaksiny tanteraka dia nomen'ny manampahefana aostralianina hazavan'ny governemanta mba hivezivezy malalaka any ivelany tsy misy fahazoan-dàlana manokana na mila manao confinement rehefa tonga, manomboka ny 1 Novambra.
Ny firenena dia nampitony ny fameperana henjana amin'ny sisintany iraisam-pirenena androany, ka nahafahan'ny fianakaviana maro tafaray indray taorian'ny efa ho 600 andro nisaraka ary niteraka seho mampihetsi-po tany amin'ny seranam-piaramanidina tao Sydney sy Melbourne.
Ny hetsika dia tonga betsaka amin'ny Aostralia Miova avy amin'ny tetikady fitantanana ny valan'aretina COVID-zero mankany amin'ny fiainana miaraka amin'ny viriosy ao anatin'ny fihetsiketsehana vaksiny lehibe. Maherin'ny 77% amin'ireo 16 taona no ho miakatra ao amin'ny firenena misy 25.9 tapitrisa no nahazo tifitra roa tamin'ny jab hatreto, hoy ny minisitry ny fahasalamana.
Ny governemanta Aostraliana dia namoaka ny iray amin'ireo valinteny henjana indrindra tamin'ny areti-mifindra, nanakatona ny sisintany iraisam-pirenena 18 volana lasa izay. Na ny olom-pirenena na ny mpivahiny dia samy voarara tsy hiditra na hivoaka ny firenena tsy misy fanavahana. Nampisaraka fianakaviana sy namana ilay hetsika, ka maro ny Aostraliana tsy afaka nanatrika hetsika lehibe, fampakaram-bady na fandevenana.
Ny alatsinainy vao maraina, ny sidina avy any Singapore ary Los Angeles no tonga voalohany tany Sydney, Aostralia. Ireo mpandeha tonga dia nilaza fa “somary mampatahotra sy mampientam-po” ny diany ary namaritra ny fahatsapana farany ny hoe afaka mody any an-trano aorian'izany fotoana izany ho “tsy misy dikany”.